4 Ma Boaz gara n’ọnụ ụzọ ámá+ wee nọdụ ala n’ebe ahụ. Ma, lee! onye ahụ ga-agbara nwaanyị ahụ, bụ́ onye Boaz kwuru banyere ya,+ na-agafe. O wee sị: “Nwoke m, bịa nọdụ ala n’ebe a.” O wee bịa nọdụ ala. 2 E mesịa, ọ kpọtara ndị okenye+ iri nke obodo ahụ wee sị: “Nọdụnụ ala n’ebe a.” Ha wee nọdụ ala. 3 O wee sị onye ga-agbara nwaanyị ahụ:+ “Neomi, bụ́ onye si n’ala Moab lọta,+ ga-ere ibé ala nwanne anyị nwoke Elimelek.+ 4 Mụ onwe m chere na m kwesịrị ịgwa gị ya, sị, ‘Zụrụ ya+ n’ihu ndị bi n’obodo a na ndị okenye ndị m.+ Ọ bụrụ na ị ga-agbara ya, gbara ya; ma ọ bụrụ na ị chọghị ịgbara ya, gwa m, ka m mara, n’ihi na ọ dịghị onye ọzọ ga-agbara ya ma e wezụga gị,+ ọ bụkwa m na-esote gị.’” O wee sị: “Ọ bụ m ga-agbara ya.”+ 5 Boaz wee sị: “Ụbọchị ị zụrụ Neomi ala ahụ, ọ bụkwa Rut nwaanyị Moab, bụ́ nwunye nwoke ahụ nwụrụ anwụ, ka ị ga-azụ ya ka i mee ka aha nwoke ahụ nwụrụ anwụ dịgide n’ihe nketa ya.”+ 6 Onye ahụ ga-agbara nwaanyị ahụ wee sị: “Agaghị m enwe ike ịgbara ya, ka m ghara ibibi ihe nketa m. Were ikike m nwere ịgbara ya gbara ya, n’ihi na agaghị m enwe ike ịgbara ya.” 7 Nke a bụ omenala ndị oge ochie n’Izrel banyere ikike ịgbara ihe na ịgbanwere ihe, iji mee ka ụdị ihe ọ bụla guzosie ike: Nwoke na-eyipụ akpụkpọ ụkwụ ya+ nye nwoke ibe ya, nke a bụkwa ihe àmà n’Izrel. 8 Ya mere, mgbe onye ahụ ga-agbara nwaanyị ahụ sịrị Boaz: “Zụrụ ya,” o yipụrụ akpụkpọ ụkwụ ya.+ 9 Boaz wee gwa ndị okenye na mmadụ niile, sị: “Unu bụ ndị akaebe+ taa na mụ azụwo Neomi ihe niile bụ́ nke Elimelek nakwa ihe niile bụ́ nke Kiliọn na Malọn. 10 Ana m azụrụkwa Rut nwaanyị Moab, bụ́ nwunye Malọn, ka ọ bụrụ nwunye m iji mee ka aha nwoke ahụ nwụrụ anwụ+ dịgide n’ihe nketa ya, ka a gharakwa iwepụ aha nwoke ahụ nwụrụ anwụ n’etiti ụmụnne ya nakwa n’ọnụ ụzọ ámá obodo ya. Unu bụ ndị akaebe+ taa.” 11 Ndị niile nọ n’ọnụ ụzọ ámá na ndị okenye wee sị: “Anyị bụ ndị akaebe! Ka Jehova mee ka nwunye gị nke na-abata n’ụlọ gị dịrị ka Rechel+ na Lia,+ bụ́ ndị wuru ụlọ Izrel;+ gosipụtakwa àgwà ọma gị n’Efrata+ ma mee ka aha gị dee ude na Betlehem.+ 12 Ka ụlọ gị dịkwa ka ụlọ Pirez, onye Tema mụụrụ Juda,+ site n’ụmụ Jehova ga-enye gị bụ́ ndị nwaanyị a ga-amụ.”+ 13 Boaz wee kpọrọ Rut, o wee bụrụ nwunye ya, ya na ya wee nwee mmekọahụ. Jehova wee mee ka ọ tụrụ ime,+ o wee mụọ nwa nwoke. 14 Ndị inyom wee na-asị+ Neomi: “Ka Jehova, bụ́ onye na-ekweghị ka ị ghara inwe onye ga-agbara gị taa, bụrụ onye a gọziri agọzi;+ ka e wee kpọsaa aha ya n’Izrel. 15 Ọ ghọwokwa onye na-eweghachi mkpụrụ obi gị na onye ga-elekọta gị n’agadi,+ n’ihi na nwunye nwa gị nke hụrụ gị n’anya,+ bụ́ onye ka ụmụ ndị ikom asaa mma,+ amụwo ya.” 16 Neomi wee kuru nwa ahụ kukwasị n’obi ya, o wee ghọọ onye na-elekọta ya. 17 Ndị inyom bụ́ ndị agbata obi ya+ wee gụọ ya aha, na-asị: “A mụworo Neomi nwa nwoke.” Ha wee malite ịkpọ ya Obed.+ Ọ bụ ya bụ nna Jesi,+ nna Devid. 18 Ndị a bụ ndị si n’usoro ọmụmụ Pirez:+ Pirez mụrụ Hezrọn;+ 19 Hezrọn amụọ Ram; Ram+ amụọ Aminadab; 20 Aminadab+ amụọ Nashọn;+ Nashọn amụọ Salmọn; 21 Salmọn+ amụọ Boaz; Boaz+ amụọ Obed; 22 Obed amụọ Jesi;+ Jesi amụọ Devid.+